War Deg Deg Ah Dagaal xoogan oo u dhaxeeya Ciidamada Dowlada iyo Al-Shabaab oo ka socdo sh/dhexe – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeelaha Dhaxe, ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya Ciidamada Milatariga Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab uu xiligan ka soconayo Deegaanka Miir-Taqwo.
Dagaalka ayaa qarxay kadib markii ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya ay wehliyaan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM , ay saakay aroor hore weerar ku qaadeen Deegaanka Miir-Taqwo, oo gacanta ugu jirtay dagaalyahanada Al-Shabaab.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in dagaalka u dhaxeeya Ciidamada Huwanta iyo kuwa Al-Shabaab uu si xoogan uga socda Deegaanka Miir-Taqwo, waxa ayna labada dhinac isku adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan.
Lama oga qasaaraha ka dhashay dagaalkan u dhaxeeya Ciidamada Huwanta iyo kuwa Al-Shabaab, dadka deegaanka ayaana lagu soo waramayaa in ay isaga carareen guryahooda iyaga oo ka cabsi qaba in waxyeelo ay kasoo gaarto dagaalka socda.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM , ayaa maalmihii lasoo dhaafay gobolka Shabeelaha Dhaxe waxa ay ka wadeen howlgalo ay Al-Shabaab uga saarayeen Deegaano iyo tuulooyin badan ay kaga sugnayaeen Gobolka Shabeelaha Dhaxe.
Ciidamada Kumandoska ee Danab oo ka qeyb qaatay weerarkii Aw-dheegle